बाथरूमको ग्यास गिजरले जान सक्छ ज्यान, कसरी ख्याल गर्ने? - jagritikhabar.com
बाथरूमको ग्यास गिजरले जान सक्छ ज्यान, कसरी ख्याल गर्ने?
बागबजारस्थित काठमाडौं मोडल कलेजका एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। सोमबार दिउँसो नुहाउन गएका रौतहटका १८ वर्षीय सुशील सहनी बाथरूममै बेहोस भएका थिए। उनी कलेजको होस्टेलमा बस्थे।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार दिउँसो ३/४ बजेतिर अस्पताल लगिएको थियो।
अस्पतालले सहनीलाई मृत घोषणा गरेको थियो।
प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले ग्यास गिजरमा पानी तताएर नुहाउन खोज्दा भेन्टिलेसनको कमीले सहनी बेहोस भएको हुन सक्ने बताए।
‘अहिलेसम्म ग्यास गिजरको कारण मृत्यु भएको भन्ने छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ मैनालीले भने।
कक्षा ११ मा पढ्ने सहनीको मृत्यु भएपछि मंगलबार विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको लापरवाहीले साथीको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
जाडोयाममा पोहोर-परार पनि ग्यास गिजरका कारण ज्यान गुमाएका घटना भएका थिए। पानी तताउन गिजर चलाउँदा भेल्टिलेसन नहुँदा बाथरूममै बेहोस हुँदा ज्यान जाने गरेको छ।
‘हामी प्राय: नुहाउन बाथरुम छिर्दा झ्याल ढोका लगाउँछौं, अनि ग्यास गिजर चलाउछौं,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि ग्यास गिजरबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा शरीरमा बढ्दै जान्छ, अक्सिजन कमी हुन्छ र मानिस बेहोस हुन्छन्।’